musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Kutyisa kunotyisa muTanzania: Gunman afa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • mhosva • nhau • chengetedzo • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Mapurisa ekuTanzania akapfura nekuuraya murume aibata pfuti anofungidzirwa kuti ndewekuSomalia akachema kupfura nemapurisa emuDar es Salaam mushure mekunge murume uyu apfura nekuuraya mapurisa maviri muchiitiko chinotyisa nhasi.
Mumiriri weUnited States muTanzania akapa yambiro kuvagari vekuAmerica vari munyika nekuda kwepfuti yakaitika muDar es Salaam.
Kupfura kwakaitika padyo neAmerican Embassy inova zvakare imba yemamishinari eJapan, Kenya, neRussia pamwe nemasangano emari.
Chinangwa chemupfuri pakurwisa hachizivikanwe panguva ino.
Mumiriri weUnited States muTanzania aburitsa yambiro kuvagari vekuAmerican kuti vagare vakangwarira pavanotyaira nemumatunhu akasiyana siyana eTanzania. Embassy yeUnited States yakurudzira vagari vayo kuti "Vadzivise nzvimbo iyi uye vatarise venhau vemuno kuti vawane ruzivo."
Iye asingazivikanwe akarwisa uyo aipfura zvekupaza muTanzania guta guru reDar es Salaam, akapfura ndokuuraya mapurisa maviri mumugwagwa wakabatikana zvikuru padyo neyaimbova Embassy yeUS muTanzania.
Kupfura kwakaitika muna Ali Hassan Mwinyi Road padyo neSelander Bridge masikati, nguva yekuEast Africa.
Vatyairi vanotya uye vatyairi vakasiya mota dzavo ndokumhanya kuti vaponese hupenyu hwavo, vatapi venhau vari panzvimbo iyi vakati.
Mapurisa akakomberedza murume uyu ndokumupfura nepfuti padyo nemuzinda weFrance uri munzvimbo iyi.
Nzvimbo iyi zvakare musha wevagari nemahofisi emamishinari ekunze anosanganisira mamishinari eJapan, Kenya neRussia, uye iri padyo nemasangano emari anosanganisira KCB Bank yeKenya uye Stanbic Bank yekuSouth Africa.
Mapurisa nevachengeti muTanzania vachiri kuratidza chinangwa chekurwiswa pakati-masikati.
Vashandisi vemumigwagwa munzvimbo inowanzo dzikama yeOysterbay neUpanga vakamanikidzwa kusiya mota dzavo pavaimhanyira hupenyu hwavo.
Mavhidhiyo akatumirwa pasocial media akaratidzira mashandiro emapurisa akabatana akatenderedza mhondi asati apfurwa nepakati penzira kunze kwegedhi reMumiriri weFrance.
Vakaona vaive panzvimbo iyi vakati jongwe rinouraya rinogona kunge rakauraya vamwe vanhu panguva yekupfura.
Yepamutemo chengetedzo yambiro kubva kuUS Embassy inoti:
Security Alert - Embassy yeUS Dar es Salaam, Nyamavhuvhu 25, 2021
Location: Nharaunda padhuze neAmerican Embassy paAli Hassan Mwinyi Road, Dar es Salaam, Tanzania
Event: Kusangana Nemauto padyo neAmerican Embassy.
Kune mishumo yekusangana kwevarwi kuri kuenderera mberi padyo nemumiriri weFrance paAli Hassan Mwinyi Road.
Vagari vemuUS uye vashandi vehurumende yeUS vanokurudzirwa kuti vadzivise nzvimbo iyi.